Abavelisi boMatshini abakhuselayo beMask kunye nabaThengisi - iMveliso yase China - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa nokuThengisa ngaphandle, Co, Ltd.
Izifo zokuthintela ubhubhane
Ikhaya > Iimveliso > Imaski > Imaski yokuKhusela iMask
Oomatshini abazenzekelayo beMask (enye kubabini)
Isixhobo Esithe nkqo ebusweni
Imaski yokuKhusela iMask
Ijekethi yemaski yokukhusela ingaphakathi kwimaski. Buyisela i-gasket ngalo lonke ixesha uyisebenzisa, kwaye imaski inokusetyenziswa iphindaphindwe.
I-Mask ekhuselweyo ye-Gasket akukho lula kuphela ukuyiphatha kunye nokuyisebenzisa, kodwa kufuneka kuphela ukutshintsha i-gasket kanye ngemini, enokwenza imaski esetyenziswe iintsuku ezintathu, enokuthi ikuncede ngokufanelekileyo ukunqongophala kweemaski.
Ngaba uMasik oKhuselweyo unokuyikhusela kwiintsholongwane?
1. Ithiyori, iyasebenza kwaye inokwandisa ixesha lokusebenzisa imaski ukuya kwinqanaba elithile. Olu hlobo lwebhasikithi okanye ipani yaphuhliswa ngokukhawuleza ziinkampani ezithile ukuphendula ukunqongophala kweemaski kule bhubhani. Kukho amaphepha anamathele kumacala omabini e-gasket, anokuncamathela ngaphakathi kwimaski emva kokophula ukuthintela ukutyibilika phakathi kwemaski kunye ne-gasket.
2. Xa usebenzisa imaski ene-gasket enjalo, umoya ophefumlelwa ngulowo unxiba kuqala ungena kwi-gasket, kwaye inxenye yokufuma iya kubanjiswa okanye ifakwe yi-gasket, ukuze isixa sokufuma sifikelele kumaleko wokucoca imask. Ukucuthwa, kwaye ke Oku kunciphisa ukubonwa kombane ojameleyo kwisakhelo sokucoca esibangelwe kukunyakama.
3. Xa unxibe imaski ene-gasket enokulahla, naka ingqalelo ekhethekileyo kukuqina phakathi kwemaski kunye nobuso, kuba ezinye iirhasi ezinqabileyo ziya kuchaphazela ukuqina.
Iifayile ezishisayo: Imaski yokuKhusela iMask, abaVelisi, abaThengi, iiVenkile eziNinzi, iiFektha, Thenga, China, ezenziwe eTshayina, amaxabiso, Uluhlu lwamaxabiso, ikowuti, I-FDA
Ijekethi yeMask ekhuselayoI-gasket yokulahla imaskiMask gasketUbuso be-Mask gasketI-gasket yemaski elahliweyoIjekethi yemaski yonyangoI-gasket yabantwanaI-N95 yemaski
Nceda uzikhulule ukunika uphando lwakho kwifom engezantsi. Siza kukuphendula ngeeyure ezingama-24.
Imaski yabantu abadala
Imaski yoCoceko lweNdalo
Umatshini wemaski yendebe
Umatshini wemaski yekhephuUmatshini wokugcina imaski lilaphu elininzi elingalukwanga elenziwe ngengcinezelo eshushu, ukwenza ifom, ukutsalwa kweWelding, ukususwa kwesikhuhli, ukucheba ibhulorho yendlebe kunye nezinye iinkqubo zokuvelisa iimaski ezahlukeneyo ngokusebenza kokucoca. Izixhobo zeemaski aziyoomatshini omnye, zifuna ukusebenzisana koomatshini abaninzi abagqibezela iinkqubo ezahlukeneyo. Ezona zixhobo zemaski zidumileyo kwintengiso zibandakanya; umatshini wokumisa ikomityi obhitywe ngomatshini, umatshini wokugcina imaskethi ongasukiyo, umatshini wokukopa okwenziwe ikomityi, 3M9001 / 9002 umatshini wokugoqa wemaski, umatshini wokugcina iimasi, umatshini wemaski othuli-ntathu, njl.
Ulawulo lwaseMelika lokuTya iziyobisi (iFoodandDrugAdminication) lubizwa ngokuba yi-FDA, eyenye yearhente yolawulo esekwe ngurhulumente wase-US kwiSebe lezeMpilo neeNkonzo zaBantu (i-DHHS) kunye neSebe lezeMpilo yoLuntu. I-arhente yolawulo lwezenzululwazi, uxanduva lwe-FDA kukuqinisekisa ukhuseleko lweemaski, ukutya, izimonyo, amayeza, iiarhente zebhayoloji, izixhobo zonyango, kunye neemveliso zerediyo ezenziwa okanye ezingeniswe ngaphakathi eUnited States. Ngenye yearhente zokuqala zakarhulumente eziyeyona nto iphambili kuyo kukhusela abathengi.
Isatifikethi se-CE sinikezela ngenkcazo yobumbano yobumbano kurhwebo lweemveliso zamazwe ahlukeneyo kwimarike yaseYurophu, kwaye yenze lula iinkqubo zorhwebo. Nawuphi na umzi-mveliso ovela kulo naliphi na ilizwe elingena kwi-EU Ke ngoko, ukuqinisekiswa kwe-EC kukudlula kweemveliso zokungena kwi-European Union nakwi-European Free Trade Zone.
Izinto ezinokulahlwa ezinokuchithwa zekhabhoni
Ilaphu elingasebenziyo + elenziwe ngendwangu yecarbon fiber + ye-meltblown Isixhobo: i-gauze + eyenziwe yasebenza ngamasuntsu ekhabhoni +
Zeziphi izibonelelo kunye nokungalunganga kwee-mask ezinokulahlwa
Izibonelelo zeemaski ezilahlayo zezi: ukuthungwa okukhanyayo, ukuziva kakuhle, ukuthamba, okugcwele bhetyebhetye, ukuphefumla okufanelekileyo, kunokugcina ukufudumala, ukunwebeka, ukufunxa amanzi, ukungafumani manzi, kungabandakanyi iigesi ezinobuthi, kunye nexabiso elincinci.
Yintoni umahluko phakathi kweemaski ezilahlayo kunye neemaski zonyango
Iipropathi ezahlukeneyo: iimaski ezilahlayo zenziwe ngamacangca amabini kwilaphu elingelilo elingu-28 g. Imaski yezonyango yenziwa ubukhulu becala enye okanye ezingaphezulu zeelaphu ezingalukwanga.
Yintoni inkqubo yokwenza iimaski ezilahlayo
Izinto ezilahlayo eziqhelekileyo kwimarike zenziwe ngezinto ezingalukwanga, ezifuna ukusetyenziswa: I-PP engeyiyo eyolukiweyo, 2. Ilaphu le Meltblown, 3. Umtya webhulorho yempumlo, 4. Ibhendi yendlebe kunye nezinye izixhobo.
I-U.S "snatch" imaski yenqwelomoya eyalelwa yiFrance: hlawula imali kwisikhululo senqwelomoya kwaye unyuke
Ingxelo eyimfihlo yaseMelika Idatha yesifo saseTshayina? UTrump: Akukho ngxelo ifunyenweyo
Iimaski ezichithayo zenziwe ngaphezulu kweengcamba ezintathu zeegram ezingama-28 zelaphu elingatshiyo; ibhulorho yeempumlo yenziwa ngokokusingqongileyo ...
Idilesi: I-709, iBhloko Q3, iNkokeli yeHlabathi, iFengze District, isiXeko saseQuanzhou, kwiPhondo leFujian, China